Home News Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Baal-maray Nidaamka Maamul Wadaaga Ah?
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Baal-maray Nidaamka Maamul Wadaaga Ah?
Godoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cismaan Cumar (Injineer Yariisow) aya dhawaanahan ku mashquulsana howlaha Mooshinka Jawaari laga laga keenay,iyado uu Gudoomiye Yariisow deegan ku aha Hoteelka SYL ee Magaalada Muqdisho halkaasi lacagihi Gobolka uu ku bixiyay Mooshinkaasi Saxibkiis Kheeyre uu watay.
Gudoomiye Yariisow aya baalmaray nidaamka maamul wadaaga ah iyado shaqsiyaadki xilalka ka hayay Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar uu korkooda keenay shaqsiyaad kale oo isaga ka biyo cabaya.
Dhibaato xoogan aya maalmahan la isku qabay xili labadii todobaad ee laso dhaafay lacagtii Dowlada Hoose lala Baxay iyado shaqsiyaadka uu keensaday Gudoomiye Yariisow ku takri fal uu soo amray halkaasi ay ka sameeyeen.
Duqa Muqdisho aya sameyay fal laga xumaado madama shaqsiyadki xilalka hayay uu dul keensaday shaqsiyadkasi u fulinaya howlihiisa Xatooyo iyado laga cabsi qabo in shaqaalaha gobolka lo waayo lacag ay cidahooda ku masruufan maadaama lacagihi Gobolka Mooshinka Jawaari lagu Bixiyay.